ကိုရီးယား-မြန်မာ စက်မှုဥယျာဉ်မြို့တော် ပန္နက်တင်မင်္ဂလာအခမ်းအနား ကျင်းပ | Commerce
ကိုရီးယား-မြန်မာ စက်မှုဥယျာဉ်မြို့တော် ပန္နက်တင်မင်္ဂလာအခမ်းအနား ကျင်းပ
Thu, 01/14/2021 - 09:28 -- admin_ygn
မြန်မာ-ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံအကြား ကောင်းမွန်သော သံတမန် ဆက်ဆံရေးနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတို့ ကို အခြေတည်လျက် စီးပွားရေးပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ ပြယုဂ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှည်းကူး မြို့နယ်ရှိ ၅၅၆ ဧက ကျယ်ဝန်းသော ကိုရီးယား-မြန်မာ စက်မှု ဥယျာဉ်မြို့တော် (Korea-Myanmar Industrial Complex-KMIC) ၏ Ground breaking Ceremony ပန္နက် တင် မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုယင်းKMIC ၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဂုဏ်ပြုအမှာစကား Video Message ပေးပို့ခဲ့သည်။
အခမ်းအနားသို့ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦး‌သောင်းထွန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော်လင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ဘက်မှ သမ္မတရုံး စီးပွားရေးရာအကြံ ပေးပုဂ္ဂိုလ်နှင့် သမ္မတ၏တောင်ပိုင်း ဆိုင်ရာမူဝါဒအသစ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ H.E. Mr. Park Bokyeong (Adviser of the President for Economic Affairs and Chairman of Presidential Committee on New Southern Policy)၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသံအမတ်ကြီး H.E. Lee Sang Hwa ဦးဆောင်သော ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့တို့ တက်ရောက် ၍ ပန္နက်တင် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြသည်။
ယခုအခါ KMIC ၏ တည် ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ စတင်တော့မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်ခန့်တွင် ပြီးစီး နိုင်မည်ဖြစ်ကာ ယင်း KMIC မှ အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါင်း ၁၀ဝ၀ဝ၀ ခန့်ကို မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဖန်တီးပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ တိုးတက်လာမည့် မြန်မာ-ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ် ငန်းဆောင်တာများအတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် Korea Desk မှ ပံ့ပိုး ဆောင် ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်များ အပါအဝင် နိုင်ငံခြားရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှုများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပိုမိုစီးဝင် လာတော့မည်ဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံကုန် သွယ်မှု တိုးတက်လာနိုင်တော့မည်ဖြစ်ရာ မဝေးတော့သည့် အနာဂတ်တွင် အသီးအပွင့်ကောင်းများကို ရရှိခံစားနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်၍ ယနေ့ဖွင့်လှစ်ပြီးစီး ခဲ့သည့် KMIC ပန္နက်တင်မင်္ဂလာအခမ်း အနားနှင့် Korea Desk ဖွင့်ပွဲအခမ်း အနားတို့သည် COVID-19 ကမ္ဘာ့ကူး စက်ကပ်ရောဂါ ၏ စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်နေရသည့်တိုင် မြန်မာ-ကိုရီး ယားနှစ်နိုင်ငံအကြား အစိုးရအကြီး အကဲများ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန များ၊ မြန်မာသံရုံး(ဆိုးလ်မြို့)နှင့် မြန်မာ နိုင်ငံရှိ ကိုရီးယားသံရုံးတို့၏ လက်တွေ့ ကျပြီး အကျိုးများစွာရှိသည့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများမှတစ်ဆင့် ရရှိခဲ့သော အောင်မြင်မှုရလဒ်ကောင်း တစ်ခုလည်းဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါ သည်။
ဝင်းပပသူ၊ စီးပွားရေးသံမှူး မြန်မာသံရုံး၊ ဆိုးလ်မြို့
ဘရာဇီးထံမှ ပြောင်းတန်ချိန် ငါးသန်းဝယ်ယူရန် အီရန်သဘောတူညီ
ပို့ကုန်မြှင့်တင်ရန် ထိုင်းဆန်မျိုးကွဲသစ်များ တန်းစီထား
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အသက် (၂၅)နှစ်မှ (၃၄) နှစ်အရွယ်များအကြား ဝင်ငွေကွာဟချက်မြင့်မားလာ
နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်များတွင် ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် ချိုးဖောက်မှုများကို တားဆီးနှိမ်နင်းရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
EC Plaza(www.ecplaza.net)တွင် မြန်မာ့ပို့ကုန်တိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာပြခန်းဆောင် လွှင့်တင်ဖွင့်လှစ်နိုင်
တရုတ်နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု တည်ငြိမ်စေရန် စီမံချက်များ ထုတ်ပြန်
အိန္ဒိယနိုင်ငံက ပဲစင်းငုံနှင့် မတ်ပဲတင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် ကာလတိုးမြှင့်